Umbono weMorro Velho-Intuthuzelo kunye nendalo
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguKarla E Bernardo
UKarla E Bernardo yi-Superhost
I-Mirante do Morro Velho yeyona chalet intsha kwaye inkulu kwisiza. Ukusuka kwibalcony, ecaleni kwebistro, ukusuka kwisitulo sothando esitofotofo okanye nakwibhafu yethu yokuphumla, uya kuba nakho ukonwabela umbono onomtsalane wecerrado kunye nesixeko sasePirenópolis. Iingxangxasi zabucala ziyi-150m nje ukusuka kwi-chalet.
Sinikezela ngendawo yokuhlala ukuya kuthi ga kwi-4 yabantu, kwibhedi yenkosi kunye nebhedi enkulu. I-Wi-fi, i-air conditioning, i-cable TV, ikhitshi epheleleyo kunye neendawo zokupaka zabucala ziphakathi kwezinto ezinikezelwayo.
Ukuzola ecaleni kwendalo kunye neengxangxasi ezikhethekileyo kwipropathi nakwindawo eziyingqongileyo. Ifakwe kwingingqi yobuhle obumangalisayo, kwi-APA dos Pireneus, eneengxangxasi, iindledlana kunye nembonakalo entle.
I-Chalet ifumaneka kwipropathi yasemaphandleni ye-7 yeehektare ezineengxangxasi zangasese, iindlela zehlathi, idama elincinci, iinkukhu, ii-turkeys, i-geese kunye nezinye izilwanyana. Ukuhlamba okumangalisayo kwe-whirlpool kwidesika, embindini wehlathi, ukusuka apho unokubona khona isibhakabhaka kunye nesixeko sasePirenópolis ngexesha lokuhlambela okumangalisayo.
Ngamanye amaxesha, izilwanyana zasendle zibonwa, njenge-agoutis, iinkawu, i-coatis, i-toucans, i-macaws kunye nabanye. Ipropathi ineengxangxasi ezi-6, eyona inkulu ineengxangxasi ezimalunga ne-10m. Unokuhamba intaba kwaye ukonwabele umbono wesixeko kunye nezinye iingxangxasi ezikufutshane (i-Abade yimizuzu nje engama-40 kude kunye ne-Andorinhas umgama wemizuzu eli-15). Konke oku kumgama weekhilomitha ezi-3 ukusuka edolophini. Sine-intanethi ye-Wi-Fi kunye ne-cable TV enamajelo ayi-180, kodwa awusayi kukhumbula nokuba...
Ixesha lokungena kwangethuba sele libandakanyiwe kwizinga lemihla ngemihla, ukuqala ngo-11 ekuseni kwaye ushiye kude kube yi-4 ntambama, ukuze ujabulele ukuhlala kwakho ngoxolo lwengqondo kunye nexesha elide.
Zonke iingxangxasi ezivela kwiifoto zingaphakathi kwipropathi kwaye zinokuhluka kumthamo wamanzi ngokwexesha lonyaka.
Umgangatho we-intanethi ulungile, kodwa uxhomekeke kwiinguqu kunye nokwehla njengoko iyindawo yasemaphandleni.
Ingqalelo kusetyenziso lwengqondo lwebhafu eshushu. Amanzi zizinto ezixabisekileyo nezinqabileyo. Ukufudumala kwelanga, ngoko kunqande ukusetyenziswa kwamanzi ngokungakhethiyo, kucetyiswa ukuba uwasebenzise kanye kuphela ngosuku.
Izinja zamkelwa kuphela kwiChalé Aconchego do Morro Velho kwikhonkco https://abnb.me/D38Zty92Xeb
Kwipropathi enye sinee-chalet ezimbini, iRecanto do Morro Velho, ekwabhengezwe apha kwa-Airbnb kunye nophononongo olungaphezulu kwe-300 yeenkwenkwezi ezi-5 kwikhonkco https://abnb.me/3YNAeve6Ydb kunye nePedreira do Morro Velho chalet, zombini zokwakha enomtsalane yothando., kunye nembono ivuso zehlathi umzi kwisiqalo kule linki https://abnb.me/gz1ScEO6Ydb abe bath akho.
Sikwabonelela ngendlu ephambili ukuya kuthi ga kwi-10 yeendwendwe, enamagumbi okulala ayi-3 kunye nephuli yendalo https://abnb.me/0BIvZa45Ydb
Indawo yeBucolic, kufutshane nendalo, kunye neengxangxasi zabucala kwaye kufutshane nesixeko. I-Chalet eyakhiwe ngezinto zokudiliza, enomtsalane omninzi kunye nencasa entle.
Umbuki zindwendwe ngu- Karla E Bernardo
Yonke indawo yepropathi yethu ivulelekile kwiindwendwe, ngaphandle kwendlu yethu, ukuze, ukuba banqwenela, babenokwabelana ngobomi bemihla ngemihla be "roca" kwaye banokuyonwabela lonke ulonwabo lwepropathi yasemaphandleni kwaye walondoloza ngemvelo, kunye eekhilomitha ezityhutyhayo phakathi ehlathini phezu kodini lomlambo, bedlula kwiingxangxasi 6 kule propati. Unokonwabela ubumfihlo be-chalet ukonwabela ukuzola kwendawo, isibhakabhaka sasebusuku kunye neengxangxasi. Amaxesha okungena athambileyo kunye nokuphuma.
Yonke indawo yepropathi yethu ivulelekile kwiindwendwe, ngaphandle kwendlu yethu, ukuze, ukuba banqwenela, babenokwabelana ngobomi bemihla ngemihla be "roca" kwaye banokuyonwabela…